5 I-picnic Spot ehamba phambili eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 5 I-picnic Spot ehamba phambili eYurophu
Noma ngabe uhamba ngempelasonto noma iholide ende eYurophu, ngaso sonke isikhathi kufanele wenze isikhathi sokuphumula. Ipikinikhi indlela emangalisayo yokuphumula nokuncoma amanye amasayithi nokubukwa kwesakhiwo. Ngakho, ukukusiza ukuthi uqalise eholidini lakho laseYurophu, sithathe ngesandla futhi sapakisha obhasikidi wepikinikini wepiyinti elihle kunazo zonke eYurophu. Hlala nje emuva, futhi ujabulele ukubukwa!
1. I-picnic E-Petrin Hill, ePrague
Ukubukwa kanye nesimo sepaki yasePetrin Hill kwenza enye yale 5 izindawo ezinhle kakhulu zepikiniki eYurophu. Kuyamangaza, etholakala eMancane Town, IPetrin Hill yipaki eluhlaza futhi ebukekayo ebuka iPrague Castle. UPetrin unikeza imibono enhle kakhulu yenhloko-dolobha, futhi ungakhuphukela umbhoshongo obonakalayo we ukubukwa okuhle okumangalisayo lomuzi, izinqaba, namabhuloho.
UPetrin Hill uphelele epikinikini eYurophu entwasahlobo, ukuwa noma ihlobo. The leafage will look emangele ekwindla entwasahlobo nasehlobo zonke izihlahla nomhlaba ziyoqhakaza futhi zibe nombala oluhlaza. Vele ubambe ezinye izikali nge amajikijolo kusuka Izindatshana Kubhakha futhi nonke nihlelelwe ipikiniki emangalisayo ePrague.
Ungayithola Kanjani KuPetrin Hill?
IPetrin Hill ingaphesheya kweDolobha Elidala nesikhungo sedolobha. Ungahamba nge-funicular, tramu noma ibhasi, njengabo bonke abavakashi. kodwa, ungangena ePetrin Hill ngonyawo, weqa uCharles Bridge waya eMala Strana naseLennon odongeni. Kuzokuthatha cishe ihora uma isimo sezulu sihle futhi nepikinikhi yokushona kwelanga kuzoba yisiphetho esihle kulolu suku olunamaphupho edolobheni.
2. I-picnic Ngasemfuleni eSaxon Switzerland, Germany
Imifula emikhulu, Iziqongo zeqhwa ngaphambili, nezimbali eziluhlaza ezikuzungezile, ISaxon Switzerland ipaki yezwe iyipharadesi elimangazayo. Ekuseni elivila noma ekugcineni kwe ukuhamba ende, ibhuloho le-Bastei liyindawo ekahle epikinikini enhle.
Uma uzungeza intandokazi kanye nentandokazi yokuhamba ngezinyawo, nakanjani uzokwazisa ukuthatha ikhefu ukuze ube epikinikini. Ngokolunye uhlangothi, uma ukhetha ukuhlala okuhle nokuphumula, ipikiniki ngasemfuleni eSaxon Switzerland izodlula yonke iholide lakho laseYurophu.
Ungayithola Kanjani eSaxon Switzerland?
ISaxon Switzerland kuphela 30 uhambo lokuhamba ngesitimela ukusuka eDresden. Ngakho, ukupakisha i-Eierschecke, ikhofi, amajikijolo, nezithelo ezivela emakethe yendawo futhi nonke nisehlelelwe isikhathi esihle endaweni enhle kakhulu yepikinikini eYurophu.
3. I-picnic By The Lake E-Lago Di Braies, Italy
Amanzi ama-pristine aluhlaza okwesibhakabhaka neziqongo zezintaba ezibonisa echibini, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. I-Italy izulu lezwe, kuhlangene amachibi amangalisayo futhi izintaba, Akubalulekile ngempela ukucacisa izizathu eziningi ezenza leli chibi lethu liphezu kwethu 5 indawo enhle yepikiniki eYurophu.
Uma uzimisele ngokuhamba ngezinyawo ezintabeni iDolomites, i-lagi digo di Braie day-hike kulula kakhulu. Ngakho, Uqeda usuku oluhle emvelweni, ukuthatha ukuluma okuvela ePanini noma epunjini lakho nokuncoma ukubukwa kwechibi elikhulu kakhulu lemvelo eDolomites.
Ngingafika Kanjani kuLago Di Braie?
I-Lago di Braies ukuhamba kwesitimela kude neBolzano, idolobha eliseduze. Kuthatha cishe ihora ngesitimela, noma ungathola indawo yokuhlala eseduze.
IMilan iye eVenice ngesitimela
UPadua uye eVenice ngesitimela
I-Bologna ukuya eVenice ngesitimela
ERoma ukuya eVenice ngesitimela
4. I-picnic Esiqhingini SaseMargret, E-Budapest
Itholakala emfuleni waseDanube, phakathi kweBuda nePest, IMargaret Island ilungele ipipi lasentwasahlobo eBudapest. Isiqhingi 2.5 km, intandokazi phakathi kwabendawo yokuzijabulisa ngaphandle elangeni. Ngaphezu kwalokho, kunemakethe yendawo eduzane, ngakho-ke asikho isidingo sokuphatha ukuphatha kwakho kwepikiniki kusuka edolobheni ngezithuthi zomphakathi. Umane ubambe zonke izintandokazi zakho kanye nezibiliboco ezimbalwa zasendaweni emakethe bese ulibangisa kulesi siqhingi.
Kukhona nengadi yaseJapan esiqhingini saseMargaret ekufanele ngokuphelele ukuvakashelwa ngaphambi noma ngemuva kwepikiniki yakho enhle.
Ngingafika Kanjani E-Margaret Island?
Ngethilamu noma ngebhasi, Isiqhingi saseMargaret sitholakala kakhulu ngezinto zokuhamba zomphakathi. Ithiphu yangaphakathi: Ikhadi leBudapest likutholela izengezo ezikhethekile zokuthuthwa komphakathi futhi ezikhangayo.
5. I-picnic Kumakhampasi De Mars Paris
IParis ayinakubalwa izingadi ezinhle nezindawo zepikinikini eduze kwaseSeine. Indawo enhle yepikniki eParis ikhona ngaphesheya kwesikhala sodumo lwamaChamps de Mars.
Kuyindawo enhle eluhlaza phakathi kokuhlelwa kwesikhombisa ne-Eiffel tower. Iphelele ipiyano eParis futhi inikeza izihlalo ezinhle kakhulu zokushona kwelanga. Ngaphezu kokubukeka komhlaba, futhi kungenye ye 10 imibono emihle kakhulu e-Eiffel Tower eParis.
Njalo ehlobo imindeni yamaParis yaseParis ifika izothatha ilanga noma ijabulele ukubuka kwezingadi. Kuthule kakhulu futhi kunikeza indawo enhle yokubuka amalambu asebusuku e-Eiffel Tower.
Ngakho, qiniseka ukupakisha i-baguette entsha, camembert, izithelo ezintsha, iwayini, futhi ubheke kwesinye sezindawo ezinhle kakhulu zepikiniki eYurophu.
Ungayithola Kanjani Kumakhampasi De Mars Gardens?
Ungathatha isitimela se-metro noma i-RER. Mane nje wehle esiteshini iChamp de Mars-Tour Eiffel.
Ukuhamba kungakhungathekisa futhi kuqede amandla ngoba siyohlala sifuna ukubona futhi sizwe konke. I-Europe inemisebenzi nemibono eminingi emangalisayo futhi engakhohliwe ongayinikela. Ngenkathi kufanele ngaso sonke isikhathi ulwele ukubona okuningi ngangokunokwenzeka, kwesinye isikhathi udinga nje ukukuthatha kalula. Ukuba nepikinikhi ngodli lwendawo kuyindlela enhle yokuhlola izwe nokudla, ngaphandle kokwenza igxathu.
I-Amsterdam eya eParis ngesitimela
ILondon ukuya eParis ngesitimela
Rotterdam ukuya eParis ngesitimela
IBrussels iye eParis ngesitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza ekutholeni amathikithi ashibhile eshibhile aya kunoma iyiphi indawo enhle yepikiniki kuhlu lwethu.
Ingabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwethu kwebhulogi okuthi “I-5 Best picnic Spot eYurophu” kwisayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-picnic-spots-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
picnic	picniceurope	PicnicinParis	picnicspotseurope	picnictable	summertravel	UkuhambelaPrague	travelswitzerland